﻿	Air Fryer E ghere eghe Chicken - Ezi Ntụziaka
otu esi echekwa lemon meringue pie n’abali
kedu agwa dị na ofe agwa agwa iri na ise
ebe izu okuko tortilla ofe
ihe eji eje ozi na anụ ọkụkọ
Air Fryer E ghere eghe Chicken
Air Fryer Eghe Chicken dị kemmiri ihe na n'ime ya crispy crunchy akpụkpọ!
ozugbo ite mac na chiiz na ude chiiz
Ọkụkọ a na - eme ngwa ngwa n’enweghị nsogbu ma ọ bụ muss nke miri emi nke pụtara obere abụba na calorie na ụtọ niile.
Crispy E ghere eghe Chicken
Eghe eghe ọkụkọ bụ ọkacha mmasị agbakwunye na ọkụkọ Sanwichi ma ọ bụ jeere ya ozi na-ekpo ọkụ ma na-egbuke egbuke waffles .
ọdịiche dị n'etiti soy sauce na teriyaki
Dị ka anyị hụrụ ọkụkọ e ghere eghe n'anya, enwere m ike ịme na-enweghị abụba niile (yana nsogbu nke ighe miri emi). Isi nri ọkụkọ na ikuku fryer okpu.
O nwere ezigbo ihe na-esi ísì ụtọ na akpụkpọ ahụ dị nkọ mgbe anụ ahụ dị nro ma na-atọ ụtọ.
Kedu ihe dị na Fryer Fried Chicken?
ỌKỤKỌ Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, jiri ọkpụkpụ na akpụkpọ anụ ọkụkọ, kama ịkpụ ọkpụkpụ maka ekpomeekpo kacha mma. Agbanyeghị, usoro nhazi a na-arụ ọrụ maka anụ ara, nku, ụkwụ, anụ apata, ma ọ bụ ntanye.
MARINADE Buttermilk na ihendori na-ekpo ọkụ tinyere garlic ntụ na-eme ka anụ ahụ dị nro ma nwee isi. Tangy, ọ bụghị oke oseose, na ntakịrị ihe ịcha mma!
nrụgide cooker mac na chiiz na ude chiiz
NA-ekpuchi A na-ejikọ ọka na ntụ ọka na galik na galik na-esi ísì ụtọ. Maka nku dị nro, belata cayenne na paprika, ma ọ bụ mụbaa ya ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị na oseose n'ezie!
Etu esi efe ikuku eghe eghe
Eghe eghe bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ikuku fryer na-esi n'ụzọ zuru oke!
Marinate ọkụkọ ọ dịkarịa ala ½ elekere & ruo awa 24. Gwakọta ihe mkpuchi mkpuchi.
Dredge ọkụkọ na mkpuchi ngwakọta na ịgba ọma mmanụ ma ọ bụ isi nri ịgba.
Ikuku ighe ke otu oyi akwa ruo mgbe crispy.
N'ihi na keto eghere eghe , mepụta ntụ ọka wit na aki oyibo ma ọ bụ ntụ ọka ọzọ dị na keto, ma jikọta ya na 2 Tbsp. ntụ almọnd kama ịkọ ọka.
kedu ka m ga-esi mee curls chocolate
Enweghị Air Fryer? Esi nri eghe ọkụkọ na oven kama ikuku fryer.
Ọ bụrụ na ị na-eji ọkụkọ na-enweghị ọkpụkpụ, oge nri nwere ike belata. Jiri temometa ma sie nri ruo mgbe ọkụkọ ruru 165 Celsius F.
Gbaa mbọ hụ na ọkụkọ dị na otu akwa ma enwere ntakịrị ohere n'etiti ibe ọ bụla iji mee ka ikuku kesaa.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, esi nri ọkụkọ na ogbe. Kpoo ọkụkọ niile na 400 * F maka 4 nkeji tupu ị jee ozi.
Ikwughachi air fryer eghe ọkụkọ mgbe ị na-edebe ya crispy, ikuku ighe na 400 Celsius F maka 3-5 nkeji.
N'aka nke ọzọ, belata anụ ahụ n'ọkpụkpụ ma tinye ya n'ime a tọrọ ụtọ kechie , ma ọ bụ a nwere ike achịcha maka nri ohuru! Ma ọ bụ mee nri ụtọ Sanwichi ọkụkọ salad bịrịkọ .
Ọ bụrụ na echekwara ya na akpa ikuku ma ọ bụ akpa zippered, USDA na-atụ aro ka ọkụkọ eghere eghe nwere ike idobe ụbọchị 3 ruo 4 na friji. Maka ogo kachasị mma, jiri ọkụkọ eghere eghe n’ime ọnwa anọ.
Okpokoro Okuku Ikuku Ikuku
Air Fryer Chicken ara - site na ohuru ma ọ bụ oyi
Air Fryer Chicken ụkwụ - mmefu ego-enyi na enyi
Air Fryer Chicken Tenders - zuru oke maka ntinye
Air Fryer Dum ọkụkọ - kemmiri ihe & ụtọ
Ikuku nku okuku Ikuku - ya mere crispy & flavorful
Air Fryer Chicken Drumsticks - ọkacha mmasị ezinụlọ
Ndị ezinụlọ gị ha hụrụ Chicken Eghe Fryer a? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri35 Nkeji Oge Marinate30 Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere iri na ise Nkeji Ọrụ4 Onye edemedeHolly Nilsson Air Fryer E ghere eghe Chicken dị nro & kemmiri ihe n'ime, crispy na n'ụzọ zuru oke seasoned na mpụga! Bipute Ntụtụ
▢abụọ paụnd ọkpụkpụ-na ọkụkọ ya na akpukpo aru
▢1 ½ iko buttermilk
▢¼ iko ọkụ ihendori
▢1 ½ iko ntụ ọka
▢1 ngaji ntụ ntụ
▢1 ngaji nnu nnu
▢1 ngaji paprika
▢1 ngaji ose
▢⅛ ngaji ose talugwu
Preheat ikuku fryer na 370 Celsius F.
Ikpokọta ọkụkọ, buttermilk, ihendori na-ekpo ọkụ, na ntụ ntụ na friji dịkarịa ala minit 30 ma ọ bụ ruo elekere 24.
Gwakọta ihe mkpuchi niile n'ime nnukwu efere.
Wepu ọkụkọ si na marinade na-ekwe ka ngafe wepụ.
Ghichaa ọkụkọ na ngwakọta ntụ ọka ruo mgbe mkpuchi.
Tinye ọkụkọ na pan ma ọ bụ efere ma jiri mmesapụ aka fesa ya na ịgba mmiri ma ọ bụ mmanụ.
Tinye ọkụkọ n'ime otu oyi akwa na nkata ikuku ma sie ya maka nkeji iri na ise.
Mepee ikuku ikuku ma lelee ntụ ọka ntụ ọka ọ bụla, fesa mmanụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ghichaa ọkụkọ ma sie ọzọ minit 10-15 ma ọ bụ ruo mgbe crisp na ọkụkọ ruru 165 Celsius F.
Wepu site na ikuku fryer na oge na nnu na ose.
Enweghị Air Fryer? Esi nri eghe ọkụkọ na oven kama ikuku fryer. Ọ bụrụ na ị na-eji ọkụkọ na-enweghị ọkpụkpụ, oge nri nwere ike belata. Jiri temometa ma sie nri ruo mgbe ọkụkọ ruru 165 Celsius F. Gbaa mbọ hụ na ọkụkọ dị na otu akwa ma enwere ntakịrị ohere n'etiti ibe ọ bụla iji mee ka ikuku kesaa. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, esi nri ọkụkọ na ogbe. Kpoo ọkụkọ niile na 400 * F maka 4 nkeji tupu ị jee ozi. Ihe omuma nri banyere 1/3 nke ntụ ọka na 1/4 nke marinade.
Calorisị:Ogbe 500,Carbohydrates:iri na iseg,Protein:3. 4g,Abụba:33g,Abụba Ajuju:9g,Trans Abụba:1g,Cholesterol:191mg,Sodium:Ogbe 758mg,Potassium:478mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:316IU,Vitamin C:iri na otumg,Calcium:44mg,Iron:abụọmg
IsiokwuAir Fryer Eghe Chicken, Air Fryer Fried Chicken Ntụziaka, kacha mma Air Fryer Fried Chicken, otu esi eme Air Fryer Eghe Chicken N'ezieIkuku ikuku, ọkụkọ, nri abalị, ntinye, isi usoro Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .